Saturday March 07, 2020 - 12:28:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Telefeshinka Al Jazeera ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay labaxday safiiraddii ka fadhiyay illaa 8 dowladood oo isugu jira Yurub iyo Afrikaan.
dowladaha ay Itoobiya safiiraddii kalasoo baxday waxaa kamid ah Suudaan, Maqrib (Marocco), Biljamka iyo Ingiriiska, wargeys maxalli ah oo Itoobiya kasoo baxa ayaa sheegay in xukuumadda Addis Ababa ay ka carootay mawaaqifta ay dowladahaas ka qaateen khilaafka ka dhashay biya xireenka Al Nahda.
Wararka ayaa intaas ku daraya iyo maalintii Arbacada ay Itoobiya lasoo baxday safiirradii ka fadhiyay wadamada Koonfurta Suudaan iyo Australia, diblumaasiyiin ayaa sheegay in Itoobiya ay si aad ah uga carootay dowladaha Ingiriiska iyo Biljamka oo lasaftay dowladda Masar kuna baaqay in Itoobiya caddeyso waxa ay ka damacsantahay biya xireenka ay ka dhisayso Wabiga Al Niil.
Go'aankan carada leh ee Itoobiya qaadatay ayaa yimid maalin kadib markii ay wasiirrada arrimaha dibadda dowladaha ku bahoobay Ururka Jaamacadda Carabta ay taageereen dadaallada ay wadaan Suudaan iyo Masar ee ka dhanka ah biya xireenka Al Nahda.
Dowladda Itoobiya ayaa isbuucii lasoo dhaafay iska diiday in ay ka qeyb gasho shirar ka dhici lahaa magaalada Washington oo Mareykanku uu ku dhax dhaxaadin lahaa sedaxda dowladood ee isku khilaafsan qeybsiga biyaha wabiga Niil.